Mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy any Illinois Fisorohana ara-dalàna rongony ve mahafeno fepetra?
Ny mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy ao amin'ny rongony any Illinois dia afaka miditra amin'ny famatsiam-bolam-panjakana manokana hampihena ny vidiny hanokafana ny orinasany ampiasan'ny olon-dehibe - mianatra bebe kokoa eto.
Ilaozy mpisava lalana ara-tsosialy Illinois
Ny mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy any Illinois dia manome 20% ny isa totalin'ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony rongony.
Maninona no manana fangatahana fitoviana ara-tsosialy i Illinois?
Araka ny fikarohana natao tany amin'ny fanjakan'i Illinois, dia hita fa ny fameperana amin'ny lalàna teo aloha dia nanasarotra ny olona maro handray anjara amin'ny indostrian'ny rongony, ary io niteraka tsy fitoviana ara-tsosialy io izay tsy mitsahatra mampitombo isan'andro. Ny lalàn'i Illinois vaovao dia mikendry ny hanamboatra izany amin'ny alàlan'ny famoronana “Mpangataka fitoviana ara-tsosialy” hampihena ny sakana izay manakana ny olona tsy hiditra tao amin'ny indostria ka mahaforona ny ara-tsosialy ara-tsosialy any Illinois cannabis legalization. Anisan'izany ny tsy fahampian'ny renivohitra noho ny fahantrana, anisany antony hafa.
Podcast ho an'ireo mpangataka fitoviana ho an'ny Illinois
Mamaky ny lalàna momba ny fangatahana ara-tsosialy ho an'i Illinois - Kitiho eto
Fa Sarintany eo amin'ny faritra misy fiatraikany ratsy - Tsindrio eto
Famaritana mihatra amin'ny lafiny ara-tsosialy any Illinois
“Mpangataka fitoviana ara-tsosialy" dia midika hoe mpangataka iray monina any Illinois izay mivory iray amin'ireto fepetra manaraka ireto:
(1) ny mpangataka iray manana fananana sy fifehezana 51% farafaharatsiny avy amin'ny olona iray na maromaro niisa 5 farafahakeliny tao anatin'ny 10 taona talohan'izay tao amin'ny faritra tsy nasiana endrika;
(2) mpangataka iray manana fananana sy fifehezana 51% farafaharatsiny avy amin'ny olona iray na maromaro izay:
(i) dia nosamborina, nenjehina, na nanameloka noho ny fandikan-dalàna izay mendrika hivoahana eo amin'ity lalàna ity; na
(ii) dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana miantraika;
(3) ho an'ireo mpangataka manana mpiasa ambany indrindra farafahakeliny 10, mpangataka iray izay 51% amin'ireo mpiasa ankehitriny farafahakeliny:
(i) mipetraka ao amin'ny faritra tsy mahomby amin'ny ankehitriny; na
(ii) dia nosamborina, voaheloka, na nanameloka noho ny fandikan-dalàna izay mety ekena amin'ny fandaniana io lalàna io na mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray voakasik'izany.
Mpanolotsaina ny fananana ara-tsosialy ho an'ny dispensaries any Illinois
Tamin'ny 1 Oktobra 2019 - Ny Namoaka ny fangatahana dispensary cannabis ny fanjakan'i Illinois. Ity fampiharana ity dia nanana fiteny tena manan-danja ho an'ny talentanao ara-tsosialy amin'ny ekipanao.
Raha maniry ny hisoratra anarana ho mpangataka ny fiantohana ara-tsosialy ny mpangataka, omeo porofo momba ny sata mifehy ny fiasa ara-tsosialy. Ny porofon'ny sata ho Mpanolotsaina ara-tsosialy dia azo hatsangana amin'ny alàlan'ny fanomezana:
Porofon'ny salan'ilay fangatahana ho «monina any Illinois» araka ny aseho avy amin'ny antontan-taratasy fampidirana, na, raha mihatra amin'ny isam-batan’olona, ​​roa farafaharatsiny roa ireto manaraka ireto: (i) fifanarahana lease efa vita sonia ka misy ny anaran ’ny mpangataka, (ii) fifanarahana fananana izay misy ny anaran’ ny mpangataka, (iii) sekoly firaketana, (iv) karatra fisoratana anarana, (v) fahazoan-dàlana mpamily any Illinois, karapanondro, na olona manana karatra fatiantoka, (vi) volavolan-karama, (vii) volavolan-dalàna momba ny karama, na (viii) porofo hafa. ny trano fonenana na fampahalalana hafa ilaina amin'ny fametrahana trano hipetrahana. Ny olona iray dia tsy maintsy nampidirina an-trano nandritra ny 30 andro mba ho “monina any Illinois” toy ny nampiasaina tamin'ity fampiharana ity; ary
Porofoy fa ny olona na ny olona manana sy mifehy mihoatra ny 51% amin'ny orinasam-panolorana natolotra no nipetraka tao a Faritany tsy voatsara nandritra ny 5 tamin'ny 10 taona talohan'izay aseho, saingy tsy voafetra amin'ny, fametrahana hetra, fisoratana anarana, biraom-pahefana, fampindram-bola, kitapo fandoavam-bola, volavolan-karama, endrika fiantohana, na firaketana an-tsekoly izay misy ny anaran'ny tompon'andraikitra ambony izay manana azy ireo; or
Porofoy ilay olona na olona manana sy mifehy mihoatra ny 51% amin'ny fikambanana dispensing naroso nosamborina, voampanga, na nanameloka noho ny heloka rehetra natao noho ny fandaniam-pahefana amin'ny lalàna ampahibemaso 101-0027. Raha efa nasiana tombo-kase na fisolokiana ny fisamborana, ny fahatsapan-tena, na ny fitsaràna, manome firaketana an-tsoratra momba izany hetsika izany; or
Porofoy fa manana ilay olona na olona manana sy mifehy mihoatra ny 51% amin'ny fikambanana natolotry ny dispensing a ray aman-dreny, mpiambina ara-dalàna, zanaka, vady, miankina, na fiankinan-doha if olona iray izay nialoha ny 25 jona 2019, dia nosamborina, voampanga, na voampanga ho nanao fandikan-dalàna izay mendrika mendrika ho fanitarana ny lalàna ampahibemaso 101-0027. Raha efa nasiana tombo-kase na fisolokiana ny fisamborana, ny fahatsapan-tena, na ny fitsarana, dia omeo an-tsoratra ireo hetsika toy izany. Ny mpangataka dia tsy maintsy manisy porofo momba ny fifandraisan'ny tompon'andraikitra ambony na manamboninahitra sy ilay olona nosamborina, na voampanga, na nanameloka ho fanitsakitsahana rehetra natao noho ny fandaniam-pahefana amin'ny Public Public 101-0027; or
Porofo fa mampiasa mpiasa 10 na mihoatra ny mpangataka ny mpangataka, ary porofo fa 51% na mihoatra ireo mpiasa ireo no ho mendrika ny ho mpangataka ara-tsosialy ao anatin'ny iray amin'ireo fepetra omena ho an'ny entana 2, 3, ary 4 etsy ambony, raha toa ny mpiasa no fananana sy fifehezana 51% an'ny fikambanana dispensario natolotra. Ny mpangataka dia afaka manome porofo arak'izay voalaza etsy ambony ho an'ny mpiasa tsirairay. Ny mpangataka dia tokony hanome porofo ihany koa ny mpiasa manao asa manontolo andro hatramin'ny daty nanatanterahana ny fangatahana. Raha miova ny fampahalalana momba ny mpiasa na ny toeran'ny mpiasa alohan'ny hanomezana alàlana ny fahazoan-dàlana dia manana adidy hampandre ny fizarazarana momba ny fanovana ny mombamomba ny mpiasa na ny satan'ny mpiasa.
Fampiharana famindram-po amin'ny lalàna momba ny fihenam-bidy momba ny fihenam-bidy rongony amin'ny 2014
Ny fampiasana ny Program Program Medical Cannabis Pilot tamin'ny taona 2014 izay namela ny fampiasana rongony ara-pitsaboana dia voafetra ho an'ny olona izay te-hampiasa vola amin'ny indostrian'ny rongony. Ity fihetsika ity dia niaraka tamin'ny sakana nahatonga ny olona hanana orinasa eo amin'ity sehatra ity. Ny tompona vitsy ankehitriny dia tsy taratry ny fitambaran'ny mponina ato amin'ny fanjakana satria manidy izay tsy manana ny loharanom-pahalalana na mahalala ny fomba hananganana orinasa ao amin'ity sehatra ity.
Ny programam-bola ara-tsosialy dia naorina taorian'ny nahitana ny programa piloto. Ity programa ity dia natao hanampiana ireo izay nijaly tamin'ny ratsy noho ny lalàna mifototra amin'ny ozika. Natao hanasoavana ireo izay monina any amin'ny faritra tsy fahampiana noho ny fisamborana sy fampidirana am-ponja koa ny fandaharana. Araka ny lalàna vaovao,
"Ny General Assembly dia mahita sy nanambara fa ilaina ny miantoka ny tsy fitoviana sy ny rariny amin'ny fampiharana ity lalàna ity manerana ny Fanjakana".
Ahoana no fiantraikan'ny lalàna vaovao amin'ny mpangataka fitantanana ara-tsosialy?
Ny fanarahan-dalàna amin'ny fampiasana ny marijuana ho fialamboly any Illinois dia hisy fiantraikany tsara amin'ny olona rehetra ao amin'ny fanjakana fa tsy ny mpanjifa rongony fotsiny. Ao anatin'ny tolotra hahazoana antoka ny hisian'ny fiaraha-monina ara-tsosialy, natao hanamorana ny fisaraham-pananana fahazoan-dàlana ireo vondrom-piarahamonina voarohirohy. Ho fanampin'izay, izay rehetra mangataka fitadiavam-bola ara-tsosialy dia hahazo isa 20% ny isa nomena ireo mpangataka toy izany. Ireo teboka ireo dia hosokajiana ho an'ny kilasy samihafa ho an'ny mpangataka ivontoerana fambolena, fivoarana, na dispensaries.
Araka ny lalàna, olona mpangataka ara-tsosialy dia mety ho olona monina any Illinois, niaina faritra tsy voarohirohy tao amin'ny fanjakana nandritra ny 5 taona fara-fahakeliny. Ireo dia faritra izay ahitana fisamborana, fanamelohana ary fampidirana am-ponja taorian'ny fanitsakitsahana ny hetsika cannabis tamin'ny lasa. Ireo izay manana alàlan'ny firaketana an-tsoratra dia manana ny maha izy azy.
Iza amin'ireo olana ara-tsosialy hafa no hiresaka amin'ity lalàna ity?
Ny volavolan-dalàna dia handinika ny zon'ny mpiasa ao amin'ny indostrian'ny rongony. Tsy toy ny tamin'ny andro taloha izay nanavakavahan'ny mpiasa tao amin'ny indostrian'ny rongony, fa handray fiarovana mitovy amin'ny mpiasa any amin'ny indostria hafa izy ireo.
Ary ahoana ny Illinois Fund Development Development Fund?
Araka ny lalàna momba ny lalàna ara-dalàna momba ny rongony vaovao any Illinois, "Misy tahiry manokana natokana ho an'ny tahirim-bolam-panjakana, izay hotanana misaraka sy ankoatry ny volam-panjakana hafa rehetra, fantatra amin'ny anarana hoe Cannabis Business Development Fund".
Ity kitty manokana ity dia napetraka manokana ho an'ireo izay maniry hiditra amin'ny indostrian'ny rongony. Ny kitty dia natao hampiasaina amin'ny famatsiam-bola, hanohanana, ary hanamora ny olona maniry hiditra amin'ny indostrian'ny rongony nefa tsy mahomby amin'ny resaka famatsiam-bola.
Fomba sasany hanampy ity vola ity:
Manolotra trosa miaraka amin'ny zana-bola ambany. Ireo trosa ireo dia ampiasain'ny mpangataka ara-tsosialy mba hametrahana orinasam-bazimba raha toa ka misy fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny lalàna.
Fanolorana ny fanomezana ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy izay mety te hanomboka sy hampandehanana ny orinasa cannabis nefa tsy manana ny fahaiza-manao amin'izany.
Mandoa vola ho an'ny fanampiana hanasoa ny mpangataka ara-tsosialy
Mandoa fikarohana natao mba hampirisihana ny fandraisan'anjara ny vehivavy sy ny kilemaina ary ny vondrona vitsy an'isa ao anatin'ny fiaraha-monina.
Maninona no tsara ny fandaharana fiantohana ara-tsosialy
Ireo izay voagadra na voasambotra matetika dia mijaly matetika amin'ny fiantraikany ratsy maharitra. Izany dia satria ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy hampiasa olon-kafa miaraka amina firaketana, fa ny hafa kosa manavakavaka fotsiny ireo taloha. Raha ny marina, ireo olona izay nosamborina taloha noho ny fananana rongony dia mbola mijaly ihany na dia efa nanao fanarahan-dalàna aza. Ny mpivady, ny zanaka, ary ny havan'ireo voakasika ihany koa dia mijaly ara-bola sy ara-pihetseham-po rehefa mandeha any am-ponja ny havany.
Ity programa ity dia manome tombony ho an'ny fampiharana fahazoan-dàlana sy fanampiana ara-bola ho an'ny olona voakasik'ireo lalàna mifehy ny famonoana sivana na mivantana na ankolaka.
Iza no mahafeno fepetra hitady fitoviana ara-tsosialy?
Ireo mpangataka ara-tsosialy dia olona izay mahafeno ny fepetra takiana farany ambany indrindra hahafahana manana fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana hikarakara orinasan'ny rongony amin'ny fanjakana. Ny sasany amin'ireto fepetra ireto dia misy:
Olona iray izay mipetraka amin'ny faritra izay miatrika ny fijerena ny fizarana ara-tsosialy. Ny fipetrahana amin'ity tranga ity dia midika fa manana lenta nosoniavina izay manana ny anaran'ny mpangataka na fifanarahana amin'ny fananana.
Karatra mpifidy, fahazoan-dàlana mitondra fiara, karama sy ny karatra fampahafantarana rehetra no hampiasaina hamaritana trano fonenana.
Inona no lazain'ny lalàna momba ny fifanandrinana EX?
Ireo izay nanompo ny fotoana nahazoany marijuana sy nampiasana azy dia voadinika ao amin'ny lalàna ihany koa. Araka ny lalàna vaovao any Illinois, raha vao voaisy tombo-kase na voafafa ny fandikan-dalàna dia tsy hotakiana amin'ny mpiasa iray ny hampahafantatra ny fandikan-dalàna nataony tamin'ny mpampiasa mety hitranga. Voalaza fa, ny lalàna dia tsy natao hamerana ny mpampiasa raha ny amin'ny adidy. Ny mpampiasa iray dia mbola manan-jo hanao fanaraha-maso ifotony ary hanaraka ny fomba fanao asa ampiasain'izy ireo ho an'ny mpiasa hafa.
Inona no ataonao raha toa ianao ka mendrika ny hahazo tombony amin'ny fanomezana fiantohana ara-tsosialy?
Tsy misy isalasalana fa mahasoa ny indostrian'ny cannabis. Raha te hametraka orin'asa amin'ity indostrian-javatra ity ianao ary hanana fahazoan-dàlana amin'ny fiantohana ara-tsosialy, dia tokony handinika ny hametraka ny fangatahana anao eo ambanin'ny sokajy ara-tsosialy.
Raha tsara vintana ianao, dia mety tsy hahazo fankatoavana fotsiny ny fangatahana fa mety hahazoanao tombony amin'ny volam-panjakana ihany koa izay mety hametraka ny fihodinanao ny orinasa ary hapetraka mialoha ny fifaninanana izany. Ny vaovao tsara dia ny vola ho an'ny mpamatsy vola dia tsy vitan'ny lafo be ihany fa amin'ny fanatratrarana ireo mponina sahirana any Illinois.
Mifandraisa amin'ny mpisolovava amin'ny alikaola mahay raha tsy azonao antoka ny fizotran'ny fampiharana na raha tsy hainao ny mahasoa indrindra amin'ny teboka ara-tsosialy.
Vaovao, Izaho no Tom - tadiavo aho amin'ny alàlan'ny mpisolovava amin'ny rongony googling, avy eo kitiho ny tranokalako, cannabis industry lawyer.com. Loharano an-tserasera ho an'ny fanontanianao rehetra momba ny fitetezana ny indostrian'ny rongony - toy ny lohahevitra mafana ankehitriny any Illinois - Mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy.
Handeha hiditra amin'izany isika ary ho fantatrao tsara kokoa io lalàna io noho ny 99% amin'ny olona raha mijery hatramin'ny farany ianao, dia misy zavatra mipoapoaka ao - fa araka ny lalàn'ny YouTube dia tokony hampahatsiahy anao aho mba hitia sy hisoratra anarana.
Ny fizarana faha-7 amin'ny lalàna dia mifandraika amin'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy - saingy tsy afaka miditra antsitrika eo fotsiny isika eo aloha - mila mandinika ny famaritana ara-bakiteny ny mpangataka ara-tsosialy eo ambanin'ny lalàn'i Illinois isika - satria mankany amin'ny famaritana izy ireo.
“Mpitantana fitoviana ara-tsosialy” Midika izany fa ny mpangataka izay mponina any Illinois no mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Hitanao ve ny tsy fitovizany - ny orinasa kely dia mila "tompona sy fifehezana" an'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy, fa ny orinasa lehibe kosa mila ny isan'ireo mpiasa tsotra fotsiny. Avy eo ianao dia afaka mitazona ny fifehezana sy fitantanana araka izay tianao.
Etsy ankilany, ny filankevi-pitantanana - ny tompona sy ny mpanara-maso ny orinasa dia tena lasa manao fanatanjahan-tena amin'ny ekipa - ary tsy afaka miandry ny manampy anao amin'izany.
Fantatsika izao hoe inona ny mpangataka ara-tsosialy - nahoana isika no te ho iray amin'izy ireo? Satria ny lalàna dia aleony amin'ny fomba 2 mazava be: 1) amin'ny fanomezana farafahakeliny 20% ny isa ho an'ny fanaovana scolazy sy ny fanaovana asa-tanana ary 2) amin'ny alàlan'ny fanomezana fidiram-bola ambany amin'ny zanabola hampihena ny sakana tsy hidirana amin'ny tsenan'ny rongony ara-dalàna. .
Ny fizarana 7-10 amin'ny lalàna vaovao dia mamorona tahiry ho an'ny fampivoarana cannabis amin'ny famatsiam-bola amin'ny zana-bola ara-tsosialy ho an'ny mpampindram-bola ara-tsosialy mba handoavana ny vola ilaina amin'ny raharaham-barotra.
Ankoatr'izay, ny fanomezana dia azo amin'ny "mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy" mba handoavana ny fandaniam-bola mahazatra sy ilaina hanombohana sy hampandehanana ny orin'izy ireo.
Inona no atao hoe "mpangataka fitoviana ara-tsosialy mahay"? Hiverina amin'ny famaritana isika mba hahitana fa a:
"Mpangataka fitadiavam-bola ara-tsosialy mendrika" dia midika ho mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy izay nahazo fahazoan-dàlana fepetra arahana amin'ity lalàna ity hiasa amin'ny orinasa orinasa rongony.
Tsara - inona ny "fahazoan-dàlana fepetra"?
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fampiasana olon-dehibe amin'ny fepetra ampiasaina dia midika fahazoan-dàlana natolotry ny mpangataka ambony indrindra amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe mampiasa fahazoan-dàlana hampiasa olon-dehibe raha toa ka mihatra amin'ny fepetra voalaza ao amin'ity lalàna ity ny mpangataka, saingy tsy mahazo ny mpandray hanomboka hividy na hivarotra rongony na rongony rongony rongony.
Okay, dispensary iray azo, fa alohan'ny hisokafany - Coool… azonao atao ny manandrana mahazo vola raha toa ka mahazo ny fahazoan-dàlana ho anao ny fiantsorohana ny Equity ara-tsosialy… avy eo ianao mangataka fanampiana ... dia manangana ianao ary misokatra .. Afaka maniry ve izahay rongony ary mahazo ny fanampiana? Andao hizaha.
Oh mangatsiaka, misy fahazoan-dàlana fambolena.
"Fahazoan-dàlana hampiasaina ho an'ny olon-dehibe amin'ny fividianana olon-dehibe" dia midika fahazoan-dàlana natolotry ny mpangataka ambony indrindra amin'ny fahazoan-dàlana hampiasaina ho an'ny olon-dehibe izay manana zon'ny fahazoan-dàlana hampiasaina ho an'ny olon-dehibe raha toa ka mahafeno fepetra sasany araka ny fanapahan-kevitry ny Departemantan'ny Fambolena araka ny lalàna ny mpangataka. , saingy tsy manome alalana ny mpandray hanomboka hitombo, hanodinana, na hivarotra rongony na rongony rongony rongony.
Firy ny isan'ny fahazoan-dàlana? 30 - Mahafinaritra, saingy miandrasa raibe ny mpilalao ankehitriny, ka firy amin'izy ireo, 20 - voanjo, okay isika midina amin'ny 10. Marina.
Mety ho ratsy kokoa noho izany aza, satria,
Fizarana 20-15. Fampiharana Centre Cultivation Centre Conditional (a) Raha manome fahazoan-dàlana ivontoerana fambolena fanampiny araka ny fizarana 20-5 ny Departemantan'ny Fambolena, ny mpangataka fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe dia mampiasa ny fantsom-pifandraisana manaraka ireto amin'ny alàlan'ny toromarika nomen'ny Departemantan'ny Fambolena.
Noho izany, ny fambolena fikajiana ny olon-dehibe no mety hitranga, mihoatra ny teboka 10 amin'izao fotoana izao dia mila tonga an-tserasera, mpankafy, ka aleo mifantoka fotsiny amin'iroa ireo fanomezana omena fahafaham-bola ireo ary jereo hoe inona ny karazana famatsiam-bola.
c) Ny trosa arahin'ireto fizarana ity:
(1) dia tsy maintsy atao raha toa ka, amin'ny fanapahan-kevitry ny Departemanta, ny tetik'asa dia mandroso ny tanjona voalaza ao amin'ity lalàna ity; ary
(2) dia tokony ho ao amin'ny fatrany sy ny endriny toy izany ary mirakitra ny fepetra sy ny fepetra momba ny fiarovana, ny fiantohana, ny tatitra, ny fiampangana tsy fahatongavana, ny fanafody tsy miova, ary ny olana hafa izay tokony hamaritan'ny departemanta ny mety ho fiarovana ny tombontsoam-bahoaka sy mba hitovizany miaraka amin'ireo tanjona amin'ity Fizarana ity Ny fehezan-teny sy ny fepetra dia mety ho latsaky ny takian'ny trosa mitovy amin'izany tsy ao anatin'ity fizarana ity.
(d) Ny fahazoana vola ambanin'ity fizarana ity dia omena amin'ny fifaninanana sy ny fifaninanana eo amin'ny taona eo ambanin'ny lalàna momba ny Account Accountability and Transparency. Ny fampiasa amin'ny alàlan'ity fizarana ity dia tokony hampivoatra sy hampiroborobo ny tanjon'ity lalàna ity, ao anatin'izany ny fampiroboroboana ireo mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy, fanofanana asa ary fampandrosoana ny mpiasa, ary fanampiana ara-teknika amin'ireo mpangataka ara-tsosialy.
Mahatonga antsika hametraka fanontaniana izany - manao ny fampiharana tsara indrindra izahay, ka tianay ny hanana ny teboka ara-tsosialy, saingy ampidirinay ao anaty fampiharana ve ny fizotran'ny fanoratana fanampiana - mino izahay fa tsy maintsy ampitomboinao ireo teboka.
Ny 20% amin'ny fangatahanao dia mankany aminao ho mpangataka ara-tsosialy. Saingy toa olona marobe no mahafeno fepetra, 800,000 XNUMX mahery misokatra amin'ny famoahana ny lalàna, ary ireo olona mipetraka amin'ny vondrom-piarahamonina mahantra - fa inona no entin'ny dispensary ho an'ny vondrom-piarahamonina mba hamahana ny olan'ny ady zava-mahadomelina? Ity no toerana ahafahan'ny tantaran'ny orinasanao tena miroborobo sy mitondra fiovana tsara amin'ny fiarahamonina.
Ireo dia mila miditra amin'ny drafitry ny fiofanana sy ny fanentanana eo amin'ny fiaraha-monina. Alao an-tsaina ange raha toa ka manohana exputement sy foara asa isan-taona ny dispensary anao? Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanan'ny bar eo an-toerana sy ny orinasa rongony izay mila mpiasa voaofana.
Ireo no zavatra tsy maintsy dinihin'ny orinasanao, indrindra raha mandeha amin'ny laharam-pahamehana ara-tsosialy, rehefa manangona ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony.
Banky amin'ny findramam-bola ve ianao? - tsisy fika. Tsy manan-draharaha amin'ny fampindramam-bola na fanomezana mihitsy ianao - tsy maintsy mahafeno fepetra ianao. Manaova famatsiam-bola arak'izay tokony hatao. Ho lafo ny fandefasana ireo fangatahana noho ny haben'ny habeny - ary na eo aza ny zavatra inoan'ny olona sasany dia mila aloa ny mpisolovava amin'ny fotoanany sy ny asany. Indrindra fa ny mpisolovava anao dia be pitsiny ara-barotra mba hanana fanolorana manokana tsy latsaky ny dimy tapitrisa dolara sy ny anjara tiany ho fandraisana anjara fanampiny avy amin'ireo mpangataka ara-tsosialy
Fampiharana famindram-po amin'ny lalàna momba ny fihenam-bidy rongony amin'ny taona 2014
The Ny fampiasana ny Fandaharan'asa Program Pilotom-Bazam-Pirenena amin'ny taona 2014 izay namela ny fampiasana rongony ara-pitsaboana dia voafetra be ho an'ny olona izay te hampiasa vola amin'ny indostrian'ny rongony. Ity fihetsika ity dia niaraka tamin'ny sakana nahatonga ny olona hanana orinasa eo amin'ity sehatra ity. Ny tompona vitsy ankehitriny dia tsy taratry ny fitambaran'ny mponina ato amin'ny fanjakana satria manidy izay tsy manana ny loharanom-pahalalana na mahalala ny fomba hananganana orinasa ao amin'ity sehatra ity.
Ny programam-bola ara-tsosialy dia naorina taorian'ny nahitana ny programa piloto. Ity programa ity dia natao hanampiana ireo izay nijaly tamin'ny ratsy noho ny lalàna mifototra amin'ny ozika. Natao hanasoavana ireo izay monina any amin'ny faritra tsy fahampiana noho ny fisamborana sy fampidirana am-ponja koa ny fandaharana. Araka ny lalàna vaovao, "Ny General Assembly dia mahita sy nanambara fa ilaina ny miantoka ny tsy fitoviana sy ny rariny amin'ny fampiharana ity lalàna ity manerana ny Fanjakana."
Ahoana no fiantraikan'ny lalàna vaovao amin'ny fiarahamonina?
Ny fanarahan-dalàna amin'ny fampiasana ny marijuana ho fialamboly any Illinois dia hisy fiantraikany tsara amin'ny olona rehetra ao amin'ny fanjakana fa tsy ny mpanjifa rongony fotsiny. Ao anatin'ny tolotra hahazoana antoka ny hisian'ny fiaraha-monina ara-tsosialy, natao hanamorana ny fisaraham-pananana fahazoan-dàlana ireo vondrom-piarahamonina voarohirohy. Ho fanampin'izay, izay rehetra mangataka fiantohana ara-tsosialy dia hahazo isa 25 bonus. Ireo teboka ireo dia hosokajiana ho an'ny kilasy samihafa ho an'ireo mpangataka manana fizarana ara-tsosialy sy ireo miorina ao Illinois.
Iza amin'ireo olana ara-tsosialy hafa no horesahina amin'ity lalàna ity?
Ahoana ny momba ny Tahirim-pandrosoana ho an'ny fandraharahana?
Araka io lalàna io, dia misy "vola voafidy manokana ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana, izay hajaina sy ankoatra ny volam-panjakana hafa, ho fantatra amin'ny anarana hoe" Fund of Development Cannabis Business ".
Ireo izay nanompo fotoana hikarakarana marijuana sy heverina ho dinihina ihany koa ao amin'ny lalàna. Araka ny lalàn'i Illinois vaovao, raha vao misy tombo-kase ny tombo-kase na efa nitsoaka, ny mpiasa dia tsy voatery hamoaka ny fahadisoany taloha amin'ny mpampiasa mety. Raha ny voalaza, ny lalàna dia tsy natao hamerana ny mpampiasa raha ny andraikitra no jerena. Ny mpampiasa iray dia mbola manana zo hanao fizahana eo aoriana ary manaraka ny fomba fiasa izay ampiasain'izy ireo amin'ny mpiasa hafa.
Mifandraisa amin'ny a mpisolovava cannabis mahay raha tsy matoky ny fizotran'ny fampiharana ianao na tsy hainao ny mahazo tombony tsara amin'ny teboka sosialy.